काठमाण्डाैंमा स्वास्थ्य मापदण्ड नमानी बाहिर निस्कनेलाई यस्तो छ जरिवाना! – PathivaraOnline
Home > समाचार > काठमाण्डाैंमा स्वास्थ्य मापदण्ड नमानी बाहिर निस्कनेलाई यस्तो छ जरिवाना!
काठमाण्डाैंमा स्वास्थ्य मापदण्ड नमानी बाहिर निस्कनेलाई यस्तो छ जरिवाना!
admin October 14, 2020 October 14, 2020 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाण्डौ – चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेकोले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड नमान्नेलाई रु एक हजार जरिवना गर्ने भएको छ ।नगरपालिकाकोे नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र नगरपालिकाभित्रका ६ वटै विषयगत समितिको प्रमुखसहितको आइतबार बसेको बैठकले बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड नमान्नेलाई जरिवना गर्ने निर्णय गरेको हो । समाचारकाे भिडियोहरू हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरिले चन्द्रागिरिमा विदेश वा अन्य जिल्लाबा ट आउने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा पिसिआर परिक्षण आफ्नो खर्चमा गर्नुपर्ने र २१ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो । “माक्स नलगाई निषेधित क्षेत्र, सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई रु १०० जरिवना गरी दुईवटा माक्स उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले नगरपालिकाका बासिन्दाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, चन्द्रागिरिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशअनुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि जात्रा महोत्सव, खुला स्थानमा भेला हुन निषेध गरेको छ । समाचारकाे भिडियोहरू हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
चोली नाप्दा इ’ज्जत जोगाउन मुस्किल: शा’रीरिक सुखप्राप्ति इन्कार गरेपछि युवती जागिर नै चैट!
६० वर्षकी बेहुली २० वर्षका बेहुला,आखिर कसरी जुर्यो त बिवाह ? हेर्नुहोस
गुण्डा नाइकेहरूकाे हुदै यस्तो हरिविजोग अर्का डन गाैशालामा….